Avy hatrany dia hitan’ilay mpikarakara ny tranomaizina fa olona tsara i Josefa. Koa dia notendreny ho mpikarakara ny mpifatotra hafa rehetra izy. Tatỳ aoriana dia tezitra tamin’ny mpitondra kapoakany sy ny mpanao mofony i Farao ary nataony tao an-tranomaizina ireo. Indray alina dia samy nanonofy izy ireo, nefa tsy fantany ny hevitry ny nofiny. Ny andro nanaraka dia hoy i Josefa: ‘Ambarao amiko ny nofinareo.’ Ary rehefa nambaran’izy ireo izany, dia nohazavain’i Josefa ny hevitry ny nofin’izy ireo, noho ny fanampian’Andriamanitra.
Hizara Hizara Natao An-tranomaizina i Josefa
my tant. 22